🥇 Ukuphendula ngezimali zezithunywa
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 735
Ividiyo yokubalwa kwemali yezithunywa
Oda ukubalwa kwemali kwabathumeli
Emisebenzini yokuphatha yezinsizakalo ze-courier, izinqubo zokulawula nokubalwa kwezimali zibaluleke kakhulu, ngoba zenziwa maqondana nabasebenza emkhakheni - izithunywa. Imiphumela nekhwalithi yemisebenzi enikezwayo incike ekusebenzeni kahle kwezithunywa. Ukuntuleka kokulawulwa okufanele kuthinta izinga lokusebenza kahle nejubane lokulethwa, okukhonjiswa ngempendulo engemihle evela kumakhasimende. Ngaphezu kokulawula, kubalulekile ukungakhohlwa mayelana nokubalwa kwezimali komsebenzi wabasebenzi basensimini. Ukubalwa kwemali kwabathumeli kubonakala ngokugcinwa kwedatha yokubalwa kwemali kusheduli yomsebenzi, amahora okusebenza, inani lama-oda, njll. Izenzo ezifika ngesikhathi zokubhaliswa kwezithunywa zikuvumela ukuthi ugweme izimo eziyinkinga ngokukhokha noma ukulethwa, okukuvumela ukuthi ubheke ukusebenza kwekhuriya ngalinye. Isenzo sokugcina somsebenzi weposi ukulethwa, okungukuthi ukudluliswa kwezimpahla noma izinto zokwenzelwa iklayenti, izimpendulo zalo ezithinta kakhulu idumela lenkonzo yekhuriya. Ezimweni ezinjalo, kunconywa ukugcina amarekhodi amakhasimende, nokunikeza abathumeli izindlela zokuthola impendulo.
Impendulo enhle nezibalo zamakhasimende zingaba nomthelela omkhulu ekwandeni kwenani lamakhasimende, okuzothinta kahle izinga lenzuzo nenzuzo yenkampani. Ukugcina amarekhodi ezithunyelwa kuthungelana nesimo sendawo yomsebenzi wabo. Ukubalwa kwamakhasimende kungadala izinkinga eziningi ngenxa yokuhamba okukhulu kwama-oda. Njengamanje, imakethe yezobuchwepheshe obusha nezinhlelo zokubalwa kwezimali inikeza zonke izixazululo ezingaba khona zokwandisa imisebenzi yezinkampani. Amasistimu we-automation ahlose ukwandisa izinqubo zomsebenzi enza kube nokwenzeka ukunciphisa ukusetshenziswa kwabantu. Ukubalwa kwemali okuzenzakalelayo kunezinzuzo eziningi, kufaka phakathi ukulawulwa okuqhubekayo kokusebenza kokubalwa kwemali, okusho ukunemba okuqinisekisiwe namathuba amancane okwenza amaphutha. Ukubalwa okuzenzakalelayo kwezithunywa kuzokuvumela ukuthi uqhube ngokuzenzakalela zonke izinqubo, wenze izindawo zokuhlala, ubale amaholo, njll. Ngokuphathelene nokubalwa kwamakhasimende, uhlelo lungadlulisela ngokuzenzakalela imininingwane yama-oda ku-database, ehambisana nayo yonke imininingwane edingekayo. Le datha ngemuva kwalokho ingasetshenziselwa izinsizakalo zokumaketha ukuze kulawulwe futhi kuthuthukiswe ikhwalithi yamasevisi ahlinzekiwe.
Izinhlelo ezahlukahlukene zokubalwa kwezimali zikuvumela ukuthi ukhethe okufanele inkampani yakho, ucabangele zonke izidingo nezifiso. Kumele kuqashelwe ukuthi uhlelo oluzenzakalelayo kufanele lwenelise ngokugcwele zonke izidingo futhi lube nayo yonke imisebenzi edingekayo yokwandisa imisebenzi yenkampani. Uhlelo lwe-USU-Soft yisoftware ezisebenzelayo elungiselela izinqubo zomsebenzi zanoma iyiphi inkampani, kungakhathalekile uhlobo nomkhakha womsebenzi. I-USU-Soft isetshenziswa kabanzi phakathi kwezinkampani zezokuthutha kanye nezinsizakalo zeposi. Okuhlukile kohlelo lwe-accounting kuxhomeke ekutheni intuthuko yayo yenziwa kucatshangelwa ukwakheka kwenkampani, izidingo zayo nezinto ezithandayo. Ukwenziwa kanye nokuqaliswa kwe-USU Software kwenziwa ngesikhathi esifushane futhi akudingi ukuthi umise umsebenzi wakho futhi akubandakanyi izindleko ezengeziwe kanye nokutshalwa kwemali.
I-USU-Soft yenza imisebenzi efana nokubalwa kwezimali nokuphathwa kwayo, futhi futhi ikwenze ukuthi kube nokwenzeka ukugcina ukulawula okungaphazanyiswa kwemisebenzi noma ukude. Ngokuphathelene nokubalwa kwemali kwabathumeli, uhlelo lwe-USU-Soft likuvumela ukuthi wenze imisebenzi enjengokugcina imisebenzi yokubalwa kwemali ngokuya ngohlelo lomsebenzi nesikhathi sezithunywa, ukuphatha izithunywa, ukuqopha isikhathi nesivinini sokulethwa okwenziwa yikhuriya ngalinye, njll. Ngokuqondene nokubalwa kwamakhasimende, i-oda ngalinye lingadluliselwa ngokuzenzakalela ku-database lapho imininingwane yekhasimende ngalinye izogcinwa khona. Ngakho-ke, unalo lonke ulwazi oludingekayo locwaningo lokumaketha nokuthola impendulo kumakhasimende.
I-USU-Soft ingukutshalwa kwezimali okuhle kakhulu esikhathini esizayo senkampani yakho! It has a interface ngokukhetha yakhelwe nge ezahlukene ongakhetha. Ungasungula ukulawula imisebenzi yenkampani nabasebenzi, kufaka phakathi nabasebenza emkhakheni. Ine-timer eyakhelwe ngaphakathi, ngakho-ke uhlale wazi isikhathi esichithwa ekulethweni. Ngohlelo ungangenisa okwenziwa kwesimanje komsebenzi wabathumeli futhi wenze ukubalwa okungcono kwama-oda, amakhasimende nemishini. Imininingwane kumakhasimende ingakusiza ekwenzeni ucwaningo lokumaketha.
Izibalo ezizenzakalelayo, ukuqapha imoto nokulandelela, ukukhethwa okuzenzakalelayo komzila we-courier yizici ezimbalwa zohlelo lokusebenza.
Siphakamisa ukuthi uzijwayeze amakhono wenguqulo yedemo yamahhala ngaphambi kokukhokhela lolu hlelo. Ingalandwa kuwebhusayithi yethu. Uma usenemibuzo, ungahlala ucela abamele inkampani yethu ukuthi bakukhombise isethulo sokubona ngokucacile ukuthi imiphi imisebenzi uhlelo olunayo nokuthi bakusiza kanjani ukuthuthukiswa kwenhlangano yakho. Uhlelo lwe-USU-Soft ludume ngokusebenziseka okulula futhi okunembile, ngenxa yokuthi ulwazi oluyinkimbinkimbi luyaba lula kakhulu futhi lufundeke kalula. Abaphathi bazokwethenjelwa ngokwengeziwe, futhi bazothinta izinsizakalo neminyango ngazinye, kanye namagatsha, amatheminali, izindawo zokugcina izimpahla, ezikude nehhovisi eliphakathi. Iqiniso ngukuthi isoftware ihlanganisa bonke ababambe iqhaza emisebenzini yenkampani kwinethiwekhi eyodwa yolwazi. Ngosizo lomsebenzi wokwenza amashejuli, umqondisi ukwazi ukusuka kusabelomali futhi ahlole ngokubonakalayo intuthuko yesikhathi esizayo. Ama-Logisticians azokwazi ukuhlela amashifu nezikhathi zokusebenza. Noma yimuphi uchwepheshe webhizinisi angabhekela ohlelweni ukuze asabalalise ngendlela enengqondo isikhathi sakhe sokusebenza.